My freedom: Pansy
ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့က တနေကုန်အလုပ်လုပ်ရတယ်။ မနက်(၉)နာရီလောက် အလုပ်သွား... ရှိသမျှ ဆေးတွေအကုန်အပြင်ထုတ်... Store ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်... ပြီး ဆေးတွေပြန်ထည့်... ပင်ပန်းတာ။ Audit ရှိလို့လေ။ အဲ့ဒါနဲ့ စာမရေးဖြစ်တော့ဘူး။
ဟိုနေ့က အလုပ်က Free ထိုးပေးတဲ့ Flu Vaccine ထိုးပြီး နောက်တနေ့ကျတော့ ခေါင်းတွေတနေကုန်ကိုက်တာ ဆေးသောက်ရတယ်။ အခုတော့ သက်သာသွားပါပြီ။ ကန်ဒီ့ကွန်ပျူတာက Firefox သူ့ဟာသူ Update လုပ်ပြီး မြန်မာစာတွေ ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲမသိဘူး။ စာလုံးတွေ ပူးနေတယ်။ ဖတ်တဲ့သူတွေရဲ့ ကွန်ပျူတာမှာရော အဲ့လိုတွေပူးနေလား မသိဘူး >.<
Popular ကနေ စမ်းဝယ်ခဲ့တာ... တခါမှ အပင်မစိုက်ဖူးတော့ ဖြစ်မြောက်မယ်လို့တော့ မထင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရေတော့နေ့တိုင်းလောင်းပေးတယ်။ တပတ်လောက်ကြာတော့ အဲ့ဒီစိမ်းစိမ်းလေးတွေမြင်ပြီး ပျော်လိုက်တာ :D :D
နှစ်ပတ်လောက်နေတော့ ဒီအနေအထားဖြစ်နေပြီ။ ပုံထဲကအတိုင်း ပန်းလေးတွေပွင့်လာပါစေ (:D :D)။ ကန်ဒီ့ယုန်လေးတွေ ကြည့်ပါဦး... ၀တုတ်ပြဲလေးတွေ ဖြစ်နေပြီ။ ကန်ဒီရခါစက လက်တစ်ဆုပ်စာပဲ ရှိတယ်။ စနေနေ့ Pest Control လာဦးမှာဆိုတော့ မနက်ဖြန်သူတို့ကို သွားပို့ရဦးမယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့မှ ပြန်သွားခေါ်ရမယ်။
သူတို့ကို အထီးလား အမလားလည်း ခွဲရဦးမယ်။ မကြည့်တတ်ဘူး (>.<)။ တနင်္ဂနွေနေ့ အဆင်ပြေရင် သူတို့အတွက် Cage အသစ်ဝယ်မယ် စဉ်းစားထားတယ်။ ဒီရက်ပိုင်း အလုပ်တွေ အရမ်းရှုပ်တယ်။ ကိုယ်ရေးတဲ့စာ ကိုယ်ပြန်ကြည့်ပြီး စာလုံးတွေ ပူးနေလို့ စိတ်တိုင်းမကျဘူး >.<
Posted by Candy at 10:30 PM
အပင်လေးတွေပျိူးလိုက် ထွက်လာလိုက် ပျော်လုိုက်
နောက်တမျိုးစုိုက်လုိုက် နဲ့ ရှုပ်နေတာ။
ခုရှားရှားပါးပါးရထားတဲ့ မြန်မာပြည်ကလို ရှောက်သီးကုို အစေ့လေးတွေ အခြောက်ခံပြီး ပျိူးထားတာ
အညှောက်လေးတွေ ပေါက်လာတာ ၂ ပါတ်ပဲရှိသေးတယ်။
ကန်ဒီပျော်တယ်ဆုိုတော့ ကိုယ်ကတစ်ထပ်တည်းခံစားလို့ ရတယ်။
YOU MUST HAVE BEEN MISSING A LOT IN LIFE...until now...Cultivating plants helps humanity...loving and caring of plants and animals complete our life..
you will only know when you actually do it, the joy you get cannot be bought by money..
not only that, having indoor Flowers can help you achieveamore optimistic outlook on your life, bringing you both pleasing visual stimulation and helping you to increase your perceived happiness.
we learn something everyday, another day another adventure or experiment and more fun in life..
Tour Myanmar said...
Harmony and stability of each and every society and its enviroent is upmost important in the universe Only sympathy and loving-kindness can secure it. U love animal ! Great .Btw I miss U,KLMa GGPa
Long time no contact GGPa :D
Now u remember me. Joyful
I regularly follow u with or without comment. I know u r in good shape both physically and mentally. With love GGPa
ချွေးမလောင်းလေးလဲ အပြင်ထွက်တာနဲ့ အပင်လေးတွေဝယ်ဘို့လောက်တွေးနေတာ ...
ခေတ်ကလေးတွေ ၀ါသနာတူကြတယ် :) ...
ညီမလေး ကန်ဒီ .. ညီမလေး ဘလော့ကို အမ ဘလော့မှာ လင့်ခ်ထားတယ်..အဆင်မပြေတာ ရှိရင် ပြောပါနော်...
ok sis thanks :D